Renirano Thames: toetra, fiaviana, biby ary fandoto | Meteorolojia amin'ny tambajotra
Portillo Alemanina | 26/03/2021 15:57 | Haibolantany
Satria tsy manana fanamaivanana be loatra i Angletera dia tsy manana renirano marobe. Ny renirano tokana manana elanelam-potoana io Reniranon'i Thames. Iray amin'ireo malaza indrindra eran'izao tontolo izao izy ary tompon'andraikitra amin'ny fizarana roa an'i Londres. Ankoatr'izay dia izy io no loharano lehibe indrindra amin'ny famatsian-drano eto amin'ny firenena.
Amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao ny toetra rehetra, ny fiaviany, ny jeolojia ary ny maha-zava-dehibe ny renirano Thames.
2 Loharanon'ny renirano Thames
3 Fambolena renirano Thames
4 Fandotoana sy fiantraikany
Io no renirano lehibe indrindra sy matanjaka indrindra any Angletera izay mikoriana mankany amin'ny Ranomasina Avaratra ary mampitohy ny renivohitry ny nosy London, sy ny Ranomasina Avaratra. Amin'ny maha-nosy azy, ny halavan'ny andro dia tsy azo ampitahaina amin'ny an'ny renirano kontinanta hafa, fa mitovy halava amin'ny renirano hafa any Eropa. Ohatra, manana fanitarana mitovy amin'ny an'ny renirano Segura any Espana izy. Ny loharano dia avy amin'ny fihaonan'ny renirano 4: ny renirano Churn, ny reniranon'i Coln, ny reniranon'i Isis (fantatra ihany koa amin'ny hoe reniranon'i Windrush), ary ny renirano Leach.
Ny niandohan'ny reniranon'i Thames dia avy amin'ny vanim-potoana Pleistocene, ka izany no iheverana azy ho renirano tanora. Tamin'izany fotoana izany dia nitanjozotra tamin'ny fiandohany avy tany Wales ka hatrany Clacton-on-sea. Namakivaky ny Ranomasina Avaratra iray manontolo izy io, ho zana-kazo amin'ny reniranon'i Rhine, ankehitriny, io renirano io dia tena zava-dehibe amin'ny famatsian-drano. Tamin'izany fotoana izany dia iray amin'ireo fitaovana lehibe indrindra amin'ny fifandraisana sy fitaterana eo anelanelan'ny Westminster sy London mandritra ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX.
Ny iray amin'ireo te hahafanta-javatra amin'ity renirano ity dia ny nanala azy indray mandeha tamin'ny 1677 ary nanomboka teo dia tsy nanao izany intsony. Ny anton'izany dia ny fanitsiana ny tetezana iray manontolo ao London Bridge ary nihena ny isan'ny sy ny fahita matetika amin'ny pier izay mamela ny fikorianany hikoriana mora kokoa. Amin'izany fomba izany, amin'ny tsy famporisihana ny renirano handeha haingana kokoa, dia mihamangatsiaka ny rano amin'ny farany.
Loharanon'ny renirano Thames
Ho hitantsika eo ny loharano, ny zana-trondro ary ny halalin'ny renirano Thames. Ny làlan'ny renirano manontolo dia mamela hevitra momba ny loharano. Betsaka ny tanàna milaza fa io no toerana misy ny ony. Ny renirano Thames dia avy amin'ny lohan'i Thames sy loharano fito. Amin'ny fotoana mangatsiaka indrindra amin'ny taona ary koa amin'ny be indrindra, dia fotoana mety indrindra hitsidihana ity toerana ity. Izy io dia iray amin'ireo toerana tsara indrindra mahita ny ony mikoriana eo akaikin'ny tsangambato.
Fambolena renirano Thames
Ity renirano ity dia tsy fantatra amin'ny fizarana roa an'i Angletera ho fizarana roa ihany koa fa ahafantarana azy noho ny biby ao aminy. Tao anatin'ny folo taona lasa dia voarakitra ny isan'ny biby mampinono izay namaky firaketana iray. Ny fiarahamonina natokana ho an'ny fikarakarana sy ny fiarovana ny biby dia nanoratra anarana maromaro maherin'ny 2000 ny fahitana ofisialy biby tamin'ny folo taona lasa. Ny ankamaroan'ny biby hita fa an'ny vondrona biby mampinono amin'ny biby ao amin'ny renirano Thames dia tombo-kase. Voalaza ihany koa fa trondro feso sy trozona sahabo ho 50 no hita.
Ireo tarehimarika rehetra ireo dia tsy mitovy amin'ireo 50 taona lasa izay, rehefa nambara fa maty ny biolojika. Na eo aza ny eritreritry ny olona rehefa mandeha any Londres izy ireo ary mahita ny Renirano Thames, dia mamonjy bibidia isan-karazany tokoa izy ireo. Ohatra, misy lanonana fanisam-boany isan-taona izay manisa ireo vorona tsara tarehy rehetra miaraka amin'ny zanany ary tena dinihin'ny vondrona mpitsabo veterinera sy mpahay siansa momba ny aretina.
Voarara tanteraka ny fihazana sy fanangonana atody swans satria tena nilaina ny fanomezana ireo vorona ireo tamin'ny hetsika rehetra nataon'ny satroboninahitra nandritra ny taonjato faha-XNUMX. Ny isan'ireo vorona ireo dia notehirizina nandritra ny taona maro taty aoriana ho fomba fanao ary fomba iray hiantohana ny fitehirizana ity karazana ity. Ho fanampin'izay, manome hatsarana tsy hita isa ho an'ity tontolo ity izy ireo izay mahatonga azy io ho zavatra voajanahary kokoa. Ny fihenan'ny karazan-java-misy dia zava-misy nanomboka tamin'ny 200 taona lasa izay, azonao atao ny mahita indroa ny isan'ny ango misy ankehitriny. Ireo mpihaza tsy ara-dalàna, alika ary na ny fahalotoan'ny renirano aza dia nampihena ny isan'ireo lasely.
Fandotoana sy fiantraikany
Tokony ho ao an-tsaina fa renirano mandalo eo afovoan-tanàna lehibe izy io ary tratran'ny fandotoana. Tao anatin'ny toetran'ny fandotoana be dia be tao anatin'ny 70 kilometatra miala ny faritry Gravesend ka hatrany amin'ny locking Teddington hatrizay santionany natao tamin'ny 1957 dia namaritra fa tsy misy trondro afaka miaina ao anaty rano ireo.
Rehefa tsy nisy haavon'ny fandotoana, ny renirano Thames dia toerana mety indrindra ahafahan'ny zana-trondro hiteraka sy hazandrano hafa koa, ary ny fanjonoana dia natao ho fomba fanao. Rehefa nitombo ny tanàna ary nitombo ny isan'ny mponina dia nitombo koa ny fako izay voalaza tamin'ny renirano. Nariana nandritra ny taona maro izy io, saingy taorian'ny taona 1800 dia tena nanjary olana lehibe ny fandotoana.
Nanomboka naloto ny rano rehetra ary tsy notsaboina. Izany rehetra izany dia niteraka ny fihanaky ny bakteria izay nampihena ny oksizenina tao anaty rano izay Izy io dia fitaovana ilaina amin'ny andron'ny trondro sy ny fampandrosoana ny zavamaniry anaty rano. Mba hanamaivanana ireo olana ireo dia nokasaina hamerina ilay renirano ny asa, satria hitombo ny fitomboan'ny indostria simika, ka vao mainka niharatsy ny fandotoana. Ny indostrian'ny simika ary ny orinasa mpitrandraka solika dia nanary ny fako rehetra tao anaty renirano na vao mainka niharatsy ny loto.
Ankehitriny dia mbola voaloto ihany izy nefa izao dia iray amin'ireo renirano madio indrindra mamakivaky tanàna iray. Mbola sarotra ny asa fanarenana fa efa misy ny valiny.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny River Thames sy ny mampiavaka azy ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Meteorolojia amin'ny tambajotra » Haibolantany » Reniranon'i Thames